Bufee Ozi na-emebi Ọrụ | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 2, 2012 Tọzdee, Febụwarị 2, 2012 Douglas Karr
Lovehụnanya zuru oke nke a blog na infographic site na enyi Jascha Kaykas-Wolff. Jascha abụwo enyi ogologo oge na Mindjet bụzi onye ahịa nke anyị (n'oge na-adịghị anya ọ ga-akwado blog!). Mindjet na-eduzi ụlọ ọrụ na ịmepụta usoro ikpo okwu nke na-anaghị ahapụ gị ka ị maapụ usoro gị, mana ijikọ ma mejuputa omume na nyocha oge.
Site na Jascha:
Mana dị ka anyị niile mara, ọ bụghị naanị oke ozi toro, kamakwa ọsọ ọ na-eweta. Akwụkwọ ụtụtụ na nke mgbede enyefela aka na usoro akụkọ ebe akụkọ na-agbasa na mgbasa ozi mgbasa ozi na ntanetị na obere nkeji, na-ahapụ ọbụlagodi akụkọ akụkọ. Anyị eruola ebe ebe ọwa ndị a na-esi enweta ozi na ozi ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị njedebe: akwụkwọ akụkọ email, ọdịnaya dị n'ịntanetị, kamera weebụ, ntanye na-aga n'ihu, ozi ngwa ngwa, faili RSS, Twitter, wdg.
Mgbawa a nke ozi dịnụ nke possiblentanetị mere ka ọ dị ịtụnanya. Ma ọ bụ nnọọ eziokwu na nke a niile na-eduga na mma arụpụtaghị. N'ezie, n'ọtụtụ ụzọ ozi a na-eweta nsonaazụ na-abụghị nke.
Nke a abụghị naanị ozi, ọ bụkwa akụkọ anyị. Dika anyi n’aruru oru na ngalaba ahia karia, anyi n’achota otu nyocha ahumkponwu… Okwu ochie nke na-adị ndụ mgbe ọ na-abịa ịkọ akụkọ na nkwukọrịta ọgbara ọhụrụ. Anyị na-achọ ilekwasị anya na ebe enwere ike ịnweta data ngwa ngwa, mana ọ bụchaghị na mmetụta ahụ bụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Bufee ihe oyiyi site na OZI.
Oge Awa A Social Media…
Feb 3, 2012 n’elekere 7:43 nke abali
mma post Mr. Karr .. 🙂